तपाईको आजको राशिफल : २०७५ साल वैशाख ३ गते सोमबार – Etajakhabar
तपाईको आजको राशिफल : २०७५ साल वैशाख ३ गते सोमबार
श्रीसूर्य उत्तरायण,वसन्त ऋतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,शाके १९४०,सम्वत २०७५ साल वैशाख ३ गते सोमबार नेपाल सम्बत ११३८ चौलागा,सन् २०१८ अप्रिल १६ तारिक कृष्णपक्ष औसी तिथि विहान ७ वजेर ३८ मिनेटसम्म, अश्विनी नक्षत्र राती ४ वजेर ७ मिनेटसम्म, विष्कुम्भयोग,नागकरण,आनन्दादियोग रक्ष,सूर्य मेष राशीमा,चन्द्रमा पनि मेष राशीमा ।
ॐः–राहुकालः–विहान ७÷१५ वजेबाट ८÷५१ वजेसम्म रहनेछ,यमघण्टायोगः– विहान १०÷२८ वजेबाट मध्यान्ह १२÷४ वजेसम्म रहनेछ, दूरमुहूर्तः– मध्यान्ह १२÷२९ वजेबाट अपरान्ह १÷२१ वजेसम्म र ३÷३ वजेबाट ३÷५४ वजेसम्म रहनेछ, यी अशुभ मुहूर्त मानिन्छ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷३८ वजेबाट मध्यान्ह १२÷२९ वजेसम्म रहनेछ, । गुली कालः–अपरान्ह १÷४० वजेबाट ३÷१६ वजेसम्म रहनेछ, यो सामान्य मानिन्छ ।
ॐः–सूर्योदयबाट प्रातः ७÷१६ वजेसम्म अमृत वेला,७÷१६ वजेदेखि ८÷५२ वजेसम्म काल वेला,८÷५२ देखि १०÷२८ वजेसम्म शुभ वेला,१०÷२८ देखि १२÷४ वजेसम्म रोग वेला,१२÷४ देखि १÷४० वजेसम्म उद्वेग वेला,१÷४० देखि ३÷१६ वजेसम्म चर वेला,३÷१६ देखि ४÷५२ वजेसम्म लाभ र ४÷५२ वजे देखि सूर्यास्तसम्म अमृत वेला रहनेछ ।
ॐः–सूर्यास्तबाट ७÷५२ वजेसम्म चर वेला,७÷५२ वजेदेखि ९÷१६ वजेसम्म रोग वेला,९÷१६ देखि १०÷४० वजेसम्म काल वेला,१०÷४० देखि १२÷४ वजेसम्म लाभ वेला,१२÷४ देखि १÷२८ वजेसम्म उद्वेग वेला,१÷२८ देखि २÷५३ वजेसम्म शुभ वेला,२÷५३ वजे देखि ४÷१७ वजेसम्म अमृत र ४÷१७ वजे देखि सूर्योदयसम्म चर वेला रहनेछ ।
जीवानां जगताम् चैव सर्जक पालक प्रभु । वरद सुखदो नित्यम् सर्वान् रक्षतु सर्वदा । ॐशान्ति ॐशान्ति ॐशान्ति” ।
मेषः– गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । अनावस्यक खर्चमा थोरै नियन्त्रण आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा देखिएका समस्या दुर भएर जाने छन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । हतारमा काम नगर्नु होला ।
वृषः– दिन खर्चालु रहला । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउन सक्छ । मन चञ्चल हुनेछ । काम गरेर जश पाईने छैन । व्यर्थको घुमाई फिराई बढि हुनेछ । विवादित काममा हात नहाल्नु होला । टाउको दुख्नेछ ।
मिथुनः– आफन्तको सहयोगमा आम्दानीका नयाँ क्षेत्र पहिचान हुनेछन् । आकस्मिक आम्दानीको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । नोकरी तथा राजनीतिमा सफलता मिल्ला ।
कर्कटः–दिन उत्साहावद्र्धक नै देखिन्छ । विगतमा पुरा गर्न नसकेका काम आज पुरा हुने छन् । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । आफन्तबाट सहयोग पाईने छ । उद्योग,पराक्रम बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ ।
सिंहः– भाग्यमा अवरोध आउनेछ । राज्यसँग सरोकार रहेका काम झन्झटिला हुनेछन् । आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठमा आच आउन सक्ने हुदा काम गर्दा चनाखो रहनु होला । तनाव बढ्नेछ । कान्ति क्षय हुनेछ ।
कन्याः– बन्न लागेका काम विग्रिन सक्छन्,समयमा नै होशियार हुनुहोला । दुष्टहरु भेटिने छन् । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । मानसिक तनाव बढ्नेछ । व्यय मार्ग प्रशस्त खुल्ने छन्,मुठ्ठि कस्नु होला ।
तुलाः– नयाँ कामको अवसर आउनेछ । साझेदारी काममा विवाद बढ्न सक्छ । स्वतन्त्र व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । बैदेशिक मार्ग खुल्ने छन्,यात्राको सम्भावना देखिन्छ ।
वृश्चिकः– गोपनियता भङ्ग नगरि काम गर्नु होला । सामान्य काम सफल पार्न पनि धेरै संघर्ष गर्नु पर्नेछ । वाद विवाद मुद्धा मामिला जितिनेछ । ऋणमा काम नगर्नु होला । श्रमको मुल्य उठाईनेछ ।
धनुः– पठन पाठनमा कम ध्यान जानेछ । सन्तानको विषयले बढि पिरोल्नेछ । अन्योलता बढ्नेछ । समयमा निर्णय लिन नसक्दा अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ । वैराग्यता बढ्नेछ । व्यापारमा गिरावट आउनेछ ।
मकरः– परिवारिक चिन्ता बढ्नेछ । घरमा बस्न मन लाग्ने छैन,घर डेराको समस्या पर्न सक्छ । सोचाईको विपरित काम हुने छन् । खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउने देखिन्छ ।
कुम्भः– काम गर्ने उत्साहा बढ्नेछ । अपुरा,अधुरा काम पुरा हुनेछन् भने नया काम हात लाग्नेछ । विरोधीसँगको लडाई जितिनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधार आउनेछ । काम गर्दा दाम हात पर्नेछ । पढाई लेखाईमा प्रगति हुनेछ ।
मिनः– स्पष्ट वोल्दा आफैलाई घाटा हुनेछ । पढाईतिर भन्दा कमाईतिर मन बढि दौडिने छ । भएको संरचनालाई नविग्रिन गरि काम गर्नु होला । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुने छन् । धन संचितीमा कमि आउनेछ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ०२, २०७५ समय: १९:३८:०५
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल माघ ८ गते मँगलबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल माघ ७ गते सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल माघ ६ गते आइतबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल माघ ५ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल मंसिर ४ गते मँगलबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल मंसिर ३ गते सोमबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल मंसिर २ गते आइतबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : यो साता तपाईको भाग्य कस्तो छ ? हेर्नुहोस साप्ताहिक राशीफल मंसिर १ गते देखि ७ गतेसम्मको
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल मंसिर १ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”